Banyere Anyị - Qingdao Aedis Fabric duct Co., Ltd
Nozulu Flow Fabric duct
Aedis Fabric duct aghụghọ na akanyam akwa ventilashion usoro (ihe a maara dị ka Fabric ducts / duct sọks / sox) maka draft-free ikuku nkesa na niile ụdị nke ụlọ na ngwa.
Aedis Fabric duct bụ otu n'ime ndị mbụ na-akpa ákwà duct emepụta ike 2003 na kemgbe ahụ toro n'ime ndị kasị ibu na-akpa ákwà duct emeputa ke China.
Aedis Fabric duct emi odude ke Qingdao, China na a kwadebere n'ụzọ na elu ngụkọta oge software eme ya ahụmahụ ndị injinia na simulate ngwọta na-enye nke kacha mma oru nkwado na ákwà duct ụlọ ọrụ. Nke a ụlọ ọrụ e hiwere na 2003 na kemgbe ahụ ọma e ịgbasa ya mkpuchi nile China, na site na 2012, anyị na-amalite mbupụ anyị ákwà ikuku duct n'ụwa nile site na ụfọdụ HVAC Manufacturers 'Representatives.
Anyị na-eji proprietary 3d software chepụta gị ikuku dispersion usoro. N'agbanyeghị nke imewe mgbagwoju anyị quality Filiks hụ nnyefe na iche na na oge. Nka na ụzụ mgbanwe nke usoro jikọtara na gburugburu ebe obibi akụkụ na aku na uba uru bụ nanị ụfọdụ n'ime ihe ndị mere anyị ikuku dispersion usoro nweela ewu ewu na architects, Mmepe na ngo n'ụwa nile, bụ ndị na-tọghata ot metal ducting n'ime ákwà na usoro. Ihe ọ bụla nke nwere ike mere metal nwere ike mere na-akpa ákwà.
Fabric ikuku dispersion bụ a ngwa-ngwa na-eto eto nke. The fechaa ọdịdị nke FabricAir usoro-eme ka ọ ezigbo maka a ọnụ ọgụgụ nke ngwa gụnyere. nwa oge akụkụ, ka ulo-ikwū nile na ngosi Ụlọ Nzukọ Alaeze, na retrofitting ẹdude ụlọ. The mgbochi corrosive àgwà ka ya hugely-ewu ewu na egwuregwu Arenas, natatoriums, ulo oru esi na ọ bụghị dịghị jụrụ na oyi ngwa, ebe ot metal ducting nwere ịrịba-adịghị emezi emezi. The ịdị ọcha Njirimara na mgbochi microbial nhọrọ eme ka ọ dị elu na nri nhazi, nri nchekwa na ọgwụ ngwa. Na nkasi obi kere site bespoke eruba ụdị ka ime ụlọ na ihu igwe elu ot metal na usoro.
Iji ákwà ducting pụtara eke ihe ikuku dispersion usoro na ihe ọ bụla akụkụ, ọ bụla mgbalị na bụla diameters chọrọ. E nweghị ndị na-agaghị emeli mgbe ọ na-abịa elbows, reducers ma na--offs. Ihe ọ bụla ị ga-eme metal ducting nwere ike mere na-akpa ákwà, na mgbe ụfọdụ. Dị ka ákwà ducting abụghị corrosive, e nwere ọtụtụ nke ngwa ebe akwa ikuku dispersion usoro karịrị ot metal ducting. Fabric ducts ndị na-erughị oké ụzụ, odide free na ibu ibu nanị akụkụ dị nta nke metal ducting.
Duct na agba nwere ike ruru eru na-na-n'ime ime imewe atụmatụ na ọ bụ omume na-ebipụta logos na ndị ọzọ na-ebupụta. Ducts pụrụ ọbụna-anapụta pụrụ iche mkpuchi eg mmanụ ọgwụ ọchụ, mgbochi microbial ọgwụgwọ, mgbochi static ọgwụgwọ na na. Mụta ihe banyere anyị vasatail usoro imewe.
Ọzọ uru nke ákwà usoro n'elu metal ducting bụ elu nke occupant nkasi obi ventilated zones. Iji ákwà na-enye ohere na engineer ike ezigbo eruba nlereanya ka ọ bụla e nyere ohere na-enweghị draft, ọ dịghị odide, ọ dịghị ụzụ na dịghị nwụrụ anwụ zones. Ahụmahụ egosiwo na iji FabricAir dispersion usoro oyi ọrụ gburugburu nwere kwukwara uru nke ole na ole na-arịa ọrịa ụbọchị n'etiti ndị ọrụ, na mgbochi corrosive na ịdị ọcha ọdịdị nke ducting usoro-eme ka ọ dị elu dị na oyi na kefriza ụlọ ọrụ ndị dị ka anụ mgbere osisi.
Fabric ikuku dispersion usoro na-mara dị ka akwa ventilashion usoro, ákwà ducts, duct sọks, ma ọ bụ sox, na ndị a ma ama n'ihi na ha mgbanwe na isi uru dị ka draft-free, odide-free, noiseless, corrosion-free na ịdị ọcha. FabricAir dispersion usoro ekpuchi a dịgasị iche iche nke ngwa gụnyere. nri, egwuregwu, Industrial, retail na ọha ebe, agụmakwụkwọ, itieutom na nkasi obi n'ozuzu, na ọgwụ na ụlọ ọrụ. Mụta ihe banyere ngwa.
Okwu: Building B6, Lingang No.1 Road, Huangdao District, Qingdao, China, 266500